Safal Khabar - कारोना त्रासकै बीच पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न देशको यस्तो छ योजना !
कारोना त्रासकै बीच पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न देशको यस्तो छ योजना !
आइतबार, २१ असार २०७७, ०७ : ४५
काठमाडौ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विश्व पर्यटन यति बेला ठप्प छ तर कतिपय देशले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुन थालेपछि पर्यटक भित्र्याउने तयारी थालेका छन् ।
पर्यटक भित्र्यायाउने यस पटकको ती देशका नियम भने निकै अनौठा छन् । मेक्सिकोले पर्यटकलाई निःशुल्क बास सुविधा दिने घोषणा गरेको छ भने ग्रिसले यातायात सेवा थप सस्तो बनाउन यसमा लाग्ने कर घटाएको छ । सिसिलीले उडान शुल्कमा छुट दिने भएको छ । यस्तोमा बेलायत र कम्बोडिया अलि फरक र आश्चर्यजनक पर्यटकीय नियमका कारण चर्चामा छन् ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण पर्यटक आगमनमा प्रायः सबै देशले कडाइ गरिरहेको अवस्थामा बेलायतले भने पर्यटकलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम हटाएको छ । बेलायतले आगामी असार २६ गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न ५९ वटा देशबाट भित्रिने पर्यटकले क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम खुकुलो बनाएको हो ।
गत महिना कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने नीतिअनुरूप बेलायतले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अबदेखि कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआएका देशका नागरिकलाई मात्र क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । यद्यपि बेलायत प्रवेश गर्ने पर्यटकले सम्पर्क सूचना भने उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
कम्बोडियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पर्यटकहरूले त्यहाँ जाँदा अनिवार्य रूपमा तीन हजार डलर ‘डिपोजिट’ राख्नुपर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । यो रकम कोरोना भाइरस ‘डिपोजिट’का रूपमा उपयोग गर्ने नीति कम्बोडिया सरकारको छ । त्यस्तै ५० हजार डलरको स्वास्थ्य बीमाको प्रमाणित पनि देखाउनुपर्ने नियम कम्बोडियाले बनाएको छ । एजेन्सीलाई उदृत गर्दै गोरखापत्रमा खबर छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा अलपत्र परेका १ सय ३७ पर्यटकको उद्धार
देशभर लागू भएको लकडाउनको तेस्रो दिन बिहीबार विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा अलपत्र परेका १ सय ३७...
पोखराको लेकसाइडमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।
भ्रमण वर्ष शुरुवातको पहिलो दिन १ रुपैयाँमा बस्न खान,
पहिलोपटक होटल बुक गर्न आएका पाँच पर्यटकलाई...
नेपालमा के मन पराउँछन् पर्यटक ?
‘सगरमाथाको नाम सुनेर, अन्य सम्पदाको नाम सुनेर...